अन्तर्वार्ता Archives - TV Annapurna
August 16, 2018 August 16, 2018 Annapurna TV
नेपाली विद्यार्थीहरू पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृति निकै बढेको छ।संसारका धेरै देशहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्।विदेशमागएर अध्ययन गरेकाने पालीहरुमध्ये कतिपय स्वदेश फर्केर राम्रो प्रगति गरेका छन् ने कतिपयले उतै काम कोखोजी गरी सहज प्रकारको जीवन यापन गरिरहेका छन्।विदेश पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि अस्ट्रेलिया मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ।अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियामा जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ, त्यहाँको पढाइको अवस्था के छ, अस्ट्रेलिया पढेका विद्यार्थीहरुका लागि के कस्तो अवसर छ भन्ने सहितका विषयमा हाम्रा संवाद दाता तुल्सी अर्यालले एजुकेशन एण्ड माइग्ेशन कर्नर प्रालिका कम्लाइस् अफिशर…
मेनुका थापा भन्छिन् :बलात्कारीको पौरख देखाउने अंग छेदन गर्नुपर्छ( भिडियो सहित)
August 11, 2018 August 12, 2018 Annapurna TV
महिलामाथि हुने शारीरिक शोषण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढीरहेका छन् । कार्यक्षेत्र,समाजमात्रै होईन परिवारभित्रबाट समेत महिला असुरक्षित छन भने पछिल्ला केही घटनाले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध न्युनिकरणका लागी राज्यले निक्कै पहल गरेको भनेपनि दैनिकजसो यस्ता घटना कुनै कुनै रुपबाट प्रस्तुत हुने गरेका छन । यहि सन्द्र्धभमा महिला हिंसा त्यसमा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका कारण, यसको न्युनिकरण, राज्यको दायित्वका के हो ? यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित ७५ बढि महिलाको पीडामा मल्हम लगाउन व्यस्त रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापासँग तुल्सी अर्यालले…
डा.केसीको अनशनले गरिब नेपालीको १ सय रुपैंयामै डाक्टर बन्ने मौका गुम्यो (भिडियोसहित)
August 3, 2018 August 12, 2018 Annapurna TV
संसारमा दुर्लभ र विरलै सुन्ने सन्दर्भको साक्षी हामी नै छौँ भन्दा जोसकैलाई यो के होला भन्ने लाग्न सक्छ । हो, सबैलाई समानताको आँखाले हेर्ने, व्यवहार गर्ने संस्था हो समता । यसै समताले सस्तो अर्थात् एक सय रुपैयाँमा शिक्षा मात्रै दिएको छैन, एक सय रुपैयाँमा उपचार गर्न पाउने गरी पनि अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । यस्तै तपाईँ हामी जोसुकैले एक सय रुपैयाँमै उपचार गराउने समता अस्पताल काठमाडौँ बौद्ध स्थित कुमारीगालमा रहेको छ । २ हजारमै होलबडी चेक अप भन्दा पत्याउनै गाह्रो होला । नपत्याए पनि सुखै छैन । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र…
July 22, 2018 August 3, 2018 Annapurna TV
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि देशले स्थायी र शक्तिशाली सरकार पाएको छ । हाल सरकारसँग स्पष्टै दुई तिहाइ बहुमत छ । यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा स्वभाविक बढी छन् । केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि विभिन्न भातृ सङ्गठन र प्रदेशदेखि जिल्ला र गाउँ तहसम्म पार्टीका कार्यकर्ता समायोजनको काम अझै बाँकी छ । सरकार गठन भएको ५ महिना भयो । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म भएका विकास निर्माणका सवालमा जनता वर्तमान सरकारप्रति निराश बन्न थालेको संकेत देखिएको छ । यी र यस्तै समसामयिक विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का स्थायी समिति सदस्य…
June 24, 2018 July 12, 2018 TV-Annapurna
कर्मचारी सञ्चयकोषका कामु प्रशासक दीपक रौनियारसँग कोषका प्राथमिकता र संस्थाका चुनौतीहरूबारे भएको विशेष कुराकानीः कोषको आगामी कार्ययोजनालाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? कोषलाई म आएपछि गति दिने प्रयास गरेको छु। कोषले आजको दिनसम्म दुई सय ५६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था हो। हाम्रो प्रमुख दायित्व यसका सञ्चयकर्ता नै हुन्। हाल संस्थामा साढे पाँच लाख सञ्चयकर्ता आबद्ध छन्। सञ्चयकर्तालाई कसरी राम्रो सुविधा दिने, पहुँच विस्तार गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। सञ्चयकर्तालाई राम्रो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिनु नै कोषको पहिलो दायित्व हो। सञ्चयकर्ताको सर्वोपरी हित हाम्रो…
June 12, 2018 July 23, 2018 Annapurna TV
पछिल्लो समय राजधानी लगायत देशका विभिन्न सहरमा चोरी डकैतीका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । विगतमा भएका चोरीका घटनाको प्रबृती हेर्दा विभिन्न तरिका अपनाई चोरी गरेको पाइएको छ । राजधानी काठमाडौँमा त झन् दिउँसै विभिन्न खालका चोरीका घटना हुन्छन् । काठमाडौँमा चोरी गर्ने समूह नै सक्रिय बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय चोरीका घटना र प्रबृतीहरु के कस्ता छन् ? यसै विषयमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शैलेश कुमार क्षेत्रीसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विमल खड्काले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ वहाँसँग गरिएको कुराकानीः पछिल्लो समयमा धेरै चोरीका घटना भइरहेका…
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भयोे । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका सपना, कति सपनामै सीमित छन् त कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कतै कर्मचारी अभाव त कतै नीति, नियम अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि जनता अपेक्षाको चाङ ठुलो । अर्कोतर्फ लामो समय कर्मचारीको मनोमानीमा चलेका स्थानीय निकायलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बनाउनुपर्ने चुनौती । कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा यो एक वर्षको अवधिमा के कति काम…
अन्तर्वार्ता, प्रदेश- ७, समाचारLeaveacomment
सफल एवं सिद्धहस्त स्त्री रोग विशेषज्ञसँगै कुशल गीतकार, गायक ,कथाकार एवं चलचित्र निर्मातामात्रै होइन देशप्रेमि व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन डा. भोला रिजाल । २००४ सालमा साहित्यिक तथा कलाप्रेमि परिवारमा धरानमा जन्मिएका रिजालको सानैदेखि गीतसंगीतप्रति रुचि थियो । अनि चिकित्सक बन्ने सपना पनि । झन्डै डेढ दर्जन गीतमा गायन, दर्जन बढी सङ्गीत र सयौँ गीतका लेखक डा. भोला रिजालले ९ वटा चलचित्रको कथा लेखन तथा निमार्ण गरेका छन् । गीतसंगीत र चलचित्र दुवैक्षेत्रमा सक्रिय जीवन बिताइरहेका डा. रिजालले ओम अस्पताल तथा नेपाल मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएका छन्…
May 25, 2018 May 27, 2018 TV-Annapurna
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भयोे । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका सपना, कति सपनामै सिमित छन् त कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कतै कर्मचारी अभाव त कतै नीति, नियम अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि जनता अपेक्षाको चाङ ठुलो । अर्कोतर्फ लामो समय कर्मचारीको मनोमानीमा चलेका स्थानीय निकायलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बनाउनुपर्ने चुनौती । यस्तो अवस्थामा बाग्लुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधिमा के…
May 14, 2018 May 27, 2018 TV-Annapurna
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा नेपालमा संघीय नेपालका परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ । विगतमा संघीयताविरोधी स्वरहरू उठिरहँदा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुक संघीयतामा जान उचित छ भन्दै भन्ने तार्किक बहसमा सक्रिय शर्मा अहिले नेपालको संघीय व्यस्था कतै असफल हुने त होईन भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । नेपालमा संघीयताको भविष्य र सफलताका सुत्र के हुन सक्छन भनेर टिभी अन्नपूर्णकर्मी शर्मिला सुबेदीले गरेको कुराकानी । संघीय व्यवस्था हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो। यसको बलियो कार्यान्वयनको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नेतृत्वको रुचिमा कमी देखिन्छ। यसलाई बलियो र व्यवस्थित ढंगले अगाडि…